सातवटा गाई ‘बलात्कार’ गर्ने पक्राउ, सिसिटीभिमा देखियो फुटेज ! «
सातवटा गाई ‘बलात्कार’ गर्ने पक्राउ, सिसिटीभिमा देखियो फुटेज !
प्रकाशित मिति :2June, 2019 12:15 pm
काठमाडौ । केही महिना पहिले सार्वजनिक बसमा हस्तमैथुन गरी वीर्य महिलाको कपालमा स्खलन गरेको विषय चर्चामा आएको थियो । साउथ अफ्रिकाको वेस्टर्न केप भन्ने सहरको एक जीमखानामा यस्तै दृश्य देखिएको छ ।
जीमखानामा जीम गरिरहेकी एक महिलाको शरिर देखेर आफूलाई सम्हाल्न नसकेका एक युवकले जीमखानामै हस्तमैथुन गरेको विदेशी सञ्चारमाध्यमहरुले जानकारी दिएका छन् । यस्तो हर्कत गर्ने युवालाई जीमखानामा जीवनभरका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
ती युवाले हस्तमैथुन गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालभर भाइरल भएको छ । उनको भिडियो उजुरीका रुपमा प्रहरीसमक्ष पठाइएको, नपठाइएको स्पष्ट पारिएको छैन ।
यति मात्र हैन । भारतको अयोध्यामा सातवटा गाई ‘बलात्कार’ गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन् । अयोध्याको कर्तालिय बाबा आश्रम स्थित गौशालामा पालिएका गाईसँग सम्भोग गर्दै गर्दा ति व्यक्तिलाई रंगेहात पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनले गाईसँग सम्भोग गरेको दृश्य सिसिटिभिमा देखेपछि आश्रमका स्वयंसेवकले पक्राउ गरेका थिए ।
पक्राऊ गरी आश्रममा पुर्याएपछि ती व्यक्तिले फेरि गाईसँग सम्भोग गर्न खोजेको एक स्वंयसेवकले बताए । आश्रमका स्वय‌ंसेवकले उनले गाईलाई बलात्कार गरेको आरोप लगाएका छन् । ती व्यक्तिले आफूले मदिरा सेवन गरी यस्तो गरेको बयान प्रहरीलाई दिएका छन् । एजेन्सी